आज असार ७ गते राशिअनुसार दिउसो कुन व्यक्तिका लागि कस्तो भाग्यफल - Muldhar Post
आज असार ७ गते राशिअनुसार दिउसो कुन व्यक्तिका लागि कस्तो भाग्यफल
आजको राशिफल २०७६, ७ असार शनिबार 906 पटक हेरिएको
चारैतिर दीपावलीको उल्लास थियो । सबै दीपावली मनाउने भव्य तयारीमा जुटिरहेका थिए । त्यही समयमा एक मुस्लिम बालक पनि हिन्दूको यो उल्लासपूर्ण चाड मनाउन चाहन्थे । तर, उनको परिवार अत्यन्त गरिब थियो । जसले गर्दा उनलाई आफ्नो बालसुलभ रहर पूरा गर्न कठिन थियो । उनी आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउनै पनि पत्रपत्रिका बेच्ने गर्थे । आफ्नो पढाइ खर्च कटाएर बचेको पैसा उनी गरिब बुबाआमालाई दिने गर्थे । त्यसैले, उनीसित खासै पैसा हुँदैनथ्यो ।
बुबाआमाबाट पाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन । उनी बाबुआमासित पैसा मागेर उनीहरूलाई दुःखी बनाउन पनि चाहँदैनथे । तर, त्यस दिन उनले पत्रिका बेचेर अरू दिनको भन्दा पाँच पैसा बढी कमाए । उनी त्यही पाँच पैसा लिएर रकेट पसलमा पुगे । र, पसलेलाई पाँच पैसा देखाउँदै आफूलाई एउटा रकेट दिन अनुरोध गरे । तर, पाँच पैसामा रकेट आउँदैन भनेर पसेलेले उनको कुरा सुन्नसमेत चाहेनन् । पसलेको व्यवहार देखेर बालक निराश भए । तैपनि, उनले पसलेसित भने– ठिकै छ, पाँच पैसामा रकेट आउँदैन भने मलाई यसको बिग्रेका पटाका नै दिनोस् । छक्क पर्दै पसलेले सोधे– बिग्रेका पटाका लिएर के गर्छौ ? के काम लाग्छ त्यो ? बालकले आत्मविश्वाससाथ जवाफ दिए– त्यसबाट म रकेट बनाउँछु ।
पसलेले पाँच पैसामा बिग्रेका टन्नै पटाका दिए । बालक पनि खुसी हुँदै पटाकाको पोको बोकेर घरतिर लागे । उनले दिनभर परिश्रम गरेर एउटा शक्तिशाली रकेट बनाए । साँझको दीपावलीमा उनको गाउँको मुस्लिम टोलबाट गगनभेदी रकेट तिनै बालकका आँगनबाट मात्र उड्यो । उनको रकेटले पार गरेको दूरी देख्नेजति सबै छक्क परेका थिए । तिनै बालक पछि गएर भारतमा ‘मिसाइल म्यान’का रूपमा चर्चित भए । पछि तिनै बालक भारतका राष्ट्रपति पनि बन्न सफल भए । ती बालकको नाम थियो– एपिजे अब्दुल कलाम ।
आज मिति २०७६ साल असार महिनाको ७ गते शनिवार । अंग्रेजी पात्रोअनुसार २०१९ जुन महिनाको आज २२ तारिख रहेको छ आज सष्ठि मेष- तनाउलाई बेवास्ता गर्नु पर्दैन। यो तीव्र गतिमा सुर्ती र रक्सी झैं गम्भीर रूपमा एउटा महामारी बन्दैछ। आफ्ना मित्रको मद्दतले वित्तीय समस्याहरुको समाधान गरिनेछ। मित्र र जोडीले तपाईंलाई सान्त्वना र आनन्द दिनेछन्, अन्यथा यो एउटा नीरस र ढिलो दिन हुनेछ। तपाईंको प्रेम बहुमूल्य कुराहरू जस्तै ताजा राख्नुहोस्। समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। तपाईंले सामाजिक मिडियामा वैवाहिक जीवनका ठट्यौलीहरू पाइ राख्नु हुन्छ, तर आज तपाईं आफ्नो वैवाहिक जीवन बारेमा अचम्म लाग्ने सुन्दर तथ्य आफ्नो अगाडि आउँदा साँच्चै भावुक हुनु हुनेछ।
वृष-बाहिरी खेलहरूले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछन् – ध्यान र योग लाभदायक हुनेछन्। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। घरेलु जीवन शान्तिपूर्ण र प्यारो हुनेछ। रोमान्स सुखद र अत्यधिक रोमाञ्चक हुनेछ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन हो; तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
मिथुन-तपाईंको धेरै भरोसा र सजिलो काम गर्ने समयले तपाईंलाई आज आराम गर्नको लागि पर्याप्त समय दिएको छ। विभिन्न स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। पोस्टद्वारा आएको पत्रले सम्पूर्ण परिवारमा खुसीको समाचार ल्याउँछ। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध आज राम्रो हुने छैन। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। तपाईंले आज आफ्नो वैवाहिक जीवनका एउटा कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
कर्कट – तपाईंलाई ढाक्ने र तपाईंको प्रगतिमा बाधा गर्ने दुःखलाई टाढा फ्याँकिदिनुहोस्। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। परिवारमा भएको समारोहमा नयाँ मित्र बनाउनु हुनेछ। तर चयन गर्दा सावधान हुनुहोस्। असल मित्रहरू तपाईंले सधैं संरक्षण गर्न चाहनुहुने धन जस्तै हुन्। तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा सान्त्वना पाउनुहुनेछ। यात्रा लाभदायी तर महँगो हुनेछ। तपाईंले आफ्नी प्रियतमाको निष्कपटता माथि शङ्का गर्न सक्नुहुन्छ जसले आउँदा दिनहरूमा तपाईंको वैवाहिक जीवनको महिमा बर्बाद हुनेछ।
शिंह-आफ्नो व्यक्तित्व सुधार गर्न गम्भीर प्रयास गर्नुहोस्। ठूलो समूहमा आफूलाई संलग्न गराएमा अत्यधिक मनोरंजक हुनेछ – तर तपाईंको खर्च भने धेरै माथि पुग्नेछ। टाढाका आफन्तले आज तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछन्। कसैले तपाईंलाई प्रेममा धोखा दिन सक्छ, होसियार हुनुहोस्। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। आफ्नो जोडीले तपाईंको कुनै योजना वा परियोजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ; धैर्य नगुमाउनुहोस्।
कन्या-आफ्नो मनमा सकारात्मक विचार ल्याउनुहोस्। अरूले भनेको मानेर लगानी गरेमा आज आर्थिक घाटाको सम्भावना देखिन्छ। आफ्नो परिवारका साथ गरेको सामाजिक गतिविधिले सबैलाई तनाउमुक्त र सुखद मुडमा राख्ने थियो। आज प्रेममा आफ्नो विवेक शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्। आफ्नो जोडीसित तपाईं आज फेरि प्रेम गर्नुहुनेछ किनकि उनी यसको लागि योग्य छन्।
तुला- आफैलाई आशावादी हुन उत्प्रेरित गर्नुहोस्। यसले विश्वास र नम्रता बढ्छ तर त्यही समयमा डर, घृणा, डाह, बदला जस्ता नकारात्मक भावना छोड्न पनि तयार हुनुहोस्। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। तपाईंका परिवारका सदस्यहरुसँग केही कठिनाई हुन सक्छ तर आफ्नो मनको शान्ति नष्ट हुन नदिनुहोस्। प्रेममा मग्न भएकाहरूले प्रेमको संगीत सबै समय सुन्दछन्। आज तपाईंले यो संसारका सबै गीतहरू भूल्ने त्यो संगीत सुन्नु हुनेछ। होसियारीसँग हिंड्नु पर्ने दिन – आज तपाईंको हृदयभन्दा मनको बढी आवश्यकता पर्नेछ। तपाईंको आजको दिन आफ्ना जीवनसाथीसँग प्रेम, चुम्बन, अंकमाल, र मजा गरेर रोमान्समा बित्नेछ।
वृश्चिक-तपाईंको मनले राम्रा कुराहरू सुन्नेछ। आशिष् र राम्रो भाग्य तपाईंको बाटोमा आउनाले इच्छा पूरा हुनेछ – र यो अघिल्लो दिनको कठिन कामको परिणामले गर्दा हो। आफ्नो ठूलो पार्टी सबैलाई लिनुहोस् – आज तपाईंसँग आफ्नो समूहको लागि कार्यक्रम संगठित गर्ने ऊर्जाको अतिरिक्त मात्रा हुनेछ। तपाईंले उनीलाई पर्याप्त ध्यान दिनुभएन भने प्रेमी दुखी हुनेछन्। समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको व्यञ्जनहरुको प्रलोभन् वा अंगालो जस्ता साना मागहरूको बेवास्ता गर्नुभयो भने उनी दुखी हुन सक्नु हुनेछ।
धनु -तपाईंको तेज कार्यले तपाईंलाई उत्प्रेरित गर्नेछ। सफलता हासिल गर्न – समयसँग आफ्नो विचार परिवर्तन गर्नुहोस्। यसले तपाईंको दृष्टि फराकिलो पार्नेछ – क्षितिज बढाउनेछ – तपाईंको व्यक्तित्वमा सुधार गर्नेछ र मन समृद्ध बनाउनेछ। धेरै स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। घरेलू विषय र बाँकी रहेका घरेलू काम सक्ने अनुकूल दिन। मोमबत्तीको उज्यालोमा प्रियसँग खाना खानुहोस्। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। तपाईंको जोडी आफ्नो जीवनमा तपाईंको मूल्य वर्णन गर्दै केही सुन्दर शब्दहरू लिएर आउनेछन्।
मकर-तपाईंको भरोसा र ऊर्जा आज उच्च हुनेछ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो। आफ्नो प्रियलाई केही कठोर वचन नभन्ने प्रयास गर्नुहोस् – अन्यथा तपाईंले पछि पश्चात्ताप गर्नु पर्न सक्छ। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। दैनिक आवश्यकताहरू पूरा नगर्नाले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज तनाउ हुनेछ। यो भोजन, सरसफाइ, अन्य घरेलू काम आदि जस्तै कुराहरूको बारेमा हुन सक्छ।
कुंभ-पुरानो मित्रसँग पुनर्मिलन भएकोले तपाईंको आत्मालाई उज्यालो पार्नेछ। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। पोस्टद्वारा आएको पत्रले सम्पूर्ण परिवारमा खुसीको समाचार ल्याउँछ। प्रेमको शक्तिले तपाईंलाई प्रेम गर्ने कारण प्रदान गर्दछ। आज गरेको निर्माण कार्य तपाईंको इच्छा अनुसार पूरा हुनेछ। आफ्नो
जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।
मीन- तपाईंले व्यायाम गरेर आफ्नो वजन नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। आज, तपाईं र तपाईंको प्रेमी प्रेमको सागरमा तल्लीन हुनुहुनेछ, र प्रेमको उँचो अनुभव गर्नुहुनेछ। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण हुनेछ। धेरै विषयहरूमा धेरै असहमति हुन सक्ने हुनाले यो दिन तपाईंको लागि धेरै राम्रो हुने छैन। यसले तपाईंको सम्बन्ध कमजोर बनाउनेछ।